Learning Inclusion - Online Learning Platform For All
लर्निङ इन्कलुजन ले नवीन पाठ्यक्रमहरू विकास गरेर तपाईंहरू समक्ष ल्याउँछ जसले तपाईंलाई तपाईंको दैनिक काम र जीवनमा अझ समावेशी हुन मद्दत गर्दछ।
के कुराले हामीलाई अरू भन्दा फरक बनाउँछ?
सबैका लागि पहुंच युक्त
हाम्रो प्लेटफर्म र पाठ्यक्रमहरू सबै प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयार गरिएको छ ।
हाम्रा सबै कोर्सहरूले व्यावहारिक र वास्तविक जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान गर्दछ।
हामी हाम्रो कोर्स मान्यता प्रदान गर्न सरोारवाला संस्थाहरू सँग साझेदारी गर्दछौं।
मानसिक स्वास्थ्यको परिचय
मानसिक स्वास्थ्य बारे आधारभूत जानकारी दिने यो छोटो कोर्समा स्वागत छ। यस कोर्समा तपाईँले मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक बिमारी, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी व्याप्त रहेका भ्रम र तिनका यथार्थ तथा केही महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू जस्ता विषयहरूको आधारभूत जानकारी पाउनुहुनेछ।
अध्ययन सुरू गर्नुहोस्
डिजिटल पहुँचयुक्तता - सबैको लागि पहुँचयुक्त डकुमेन्ट कसरी बनाउने?
Welcome to Digital Accessibility Online Course – Making Accessible Documents for Everyone. In this course, we will learn to make digital files like Document, Sheets and Presentations for all users including those with disabilities. To do so, we will specially use software like Microsoft Word, Excel & PowerPoint as well as Google Docs, Sheets and Slides.
सहभागी हुने प्रकृया कस्तो छ?
सबैभन्दा पहिला तपाईँले लर्निङ्ग ईन्क्लुजनमा आफुलाई दर्ता गर्नुपर्छ र उपलब्ध पासवर्डको प्रयोग गरी लगईन गर्नुपर्छ ।
मनपरेको कोर्स छान्नुहोस्
त्यसपछी तपाईँले आफूलाई मनपरेको कोर्स छानेर त्यसमा आफूलाई भर्ना गराउन सक्नुहुन्छ ।
यो समय ज्ञान हासिल गर्ने हो । हरेक कोर्समा भएका पाठका भिडियोहरू हेर्ने र पाठ सामाग्री अध्ययन गर्नुहोस् ।
अध्ययन पुरा गर्नुहोस्
कोर्सका सबै आवश्यक पाठ्य सामाग्री तथा परिक्षा सम्पन्न गरेर तपाईँ प्रमाण पत्रका साथ ग्राडुएट हुनुहुनेछ ।
डाईभर्स प्याट्रर्न्स एक परामर्शदाता कम्पनी हो जसले विविधता र समावेशीता सम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्छ ।
ईन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट ईन्स्टिच्युट
ईन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट ईन्स्टिच्युट वाशिंगटन डीसी मा अवस्थित एक अग्रणी प्रशिक्षण र क्षमता निर्माण प्रदायक कम्पनी हो ।
एक्सेसबी एआई द्वारा संचालित एक पूर्ण स्वचालित वेब पहुँच समाधान हो जसले कुनै पनि वेबसाइटहरू अक्षम बनाउँदछ सहित सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउँदछ।
आजै लर्निङ्ग ईन्क्लुजनमा समावेश हुनुहोस्
हामी तपाईंलाई हाम्रो पाठ्यक्रमहरू अध्ययन गरेर समावेशीता र विविधता सम्बन्धी व्यावहारिक सीप प्राप्त गर्न आमन्त्रित गर्दछौं। यी सीपहरूले तपाईंलाई तपाईंको व्यक्तिगत र पेशागत जिवनमा अगाडी बढ्न मद्दत गर्छन् ।
लर्निङ्ग ईन्क्लुजन एक समावेशी अनलाइन प्लेटफर्म हो जसले समावेशीकरण र पहुँचयुक्तताका विषयमा विभिन्न कोर्सको विकास तथा प्रसार गर्छ ।
फोन: +९७७ ९८१०३००७८२
ठेगाना: अनामनगर, काठमाडौं
तपाईंको सदस्यता पुष्टि गर्न तपाईंको इनबक्स वा स्प्याम फोल्डर जाँच गर्नुहोस्।
प्रतिलिपि अधिकार © २०२२ लर्निङ्ग ईन्क्लुजनमा
डाईभर्सन प्याट्रर्न्स् द्वारा संचालित